Momba anay - QUANZHOU HOPE SHOE Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2010, ny orinasantsika dia mpamokatra kiraro matihanina. Ao amin'ny tanàna Quanzhou, faritanin'i Fujian ny orinasa. Avy eto isika dia manome hetsika R&D, Production, Logistics, Purchasing and Order Support. Manana ekipa mpivarotra matihanina izahay mba hanome serivisy feno sy sublimated, hahafahanao mamorona endrika rehetra tadiavinao sy hamokarana kiraro irinao.
Fahaiza-manamboatra: kiraro 2.5-3 tapitrisa kiraro isan-taona
Tetikasa isan-taona: mihoatra ny 20 tapitrisa dolara ary tsy mitsahatra mitombo hatrany
Ny laharana famokarana: 3
Faritra lehibe: Amerika Avaratra, Eropa, Amerika atsimo, Japon
Olana lehibe: kiraro fanatanjahan-tena, kiraro fanatanjahan-tena, kiraro ivelany sy fehin-kiraro.
Mpanjifa lakana: Skechers, Diadora, Gola, Kappa, sns.
Izahay dia manao kiraro ho anay mpanjifa maniry. Fantatsika ny tsena, manaraka akaiky ny fivoarana ary afaka mamaly haingana ny fironana vaovao.
Ny kiraro tsirairay dia manomboka eo amin'ny sangan'asan'ny mpanaingo. Ny famolavolana sy ny santionany mifandraika amin'izany dia atolotra. Natomboka ny famokarana indray mandeha rehefa mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Mpanjifa maro no efa nahitana labozia manokana noforonina toy izao. Te hanaraka ny diany ve ianao?
Ny kiraronay dia natao ho an'ny tombotsoanao
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa miaraka aminay, manana mpiara-miasa afaka manampy anao hahatratra ny fiverenan'ny varotra kiraro ianao. Ohatra, ireo orinasa eo amin'ny indostrian'ny lamaody izay mbola tsy manana kiraro amin'ny volony, fa izay nahafantatra fotoana iray. Nanatona ny torohevitra sy fampahafantarana izy ireo mba hahazoana fahatakarana ireo safidy, mamela azy ireo hiditra ao amin'ity tontolon'ny kiraro vaovao efa voaomana tsara ity. Amin'ny zavatra iainantsika - amin'ny tranga maro, ireo dingana voalohany ireo dia nitombo ho amin'ny fifandraisana ara-barotra maharitra nifototra tamin'ny fahatokisana, ny traikefa ary ny fahalefahana.
Ny fananana traikefa 10 taona amin'ny mpivarotra kiraro sy ny fanamboarana.
Efa namokatra sy manondrana kiraro nanomboka tamin'ny2010 izahay. Nanomboka teo dia tsiroaroa an-tapitrisany no nahita ny lalan'ny lehilahy sy vehivavy ary ankizy manerana an'izao tontolo izao. Izahay dia manao kiraro amin'ny fomba, loko ary volafotsy izay irin'ny mpanjifanay. Ny vokatrao dia tia tontolo iainana ary afaka manaraka ny REACH, CISIA ary fitsapana hafa izay angatahan'ny mpanjifa.